Warreen Houtii laalchisee ibsa Yunaayitid Isteetis
Warreen Houtii to’annaa mootummaa Yemen ka sirnaa jala kan jirtu gara Maribitti sosso’uu dhaabanii gara mariitti akka deebi’an Yunaayitid Isteetis yaadachiisteetti.
Waajjirri qindeessa mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa haleellaa Houti jalaa dheessuuf jecha erga waraansichi jalqabee as uummata miliyoona tokko ta’an marib keessa dahatanii jiran. Haleellaan kun namoota biyya ofii keessatti qe’ee irraa buqa’an lakkoobsa isaanii dabaluuf sababaa kan ta’u yoo ta’u, addunyaa irraa balaa namoomaa hamaa daran kan hammeessu dha.
Yoo warren Houtii furmaata siyaasaa argamsiisuuf fedha qabaatan, sochii waraanaa mara dhaabanii, haleellaa daangaa ce’e kan Saaud Arabiya irratti geggeessan dabalatee gocha jeequmsaa fi lubbuu galaafachuu danda’u irraa of qusachu qabu jehuu dhaan dubbi himaan ministii dhimma alaa Ned Price ibsa kennaniin beeksisaniiru. Adeemsa siyaasaa tokkummaa mootummootaan hoogganamuu keessatti haala milkaa’ina qabuun hirmaachuuf akkasuas jila addaa Yunaayitid Isteetis Tim Lndrking-n kan hoogganami tattaaffii diplomaasummaa irratti hirmaachuu qabu.
Jila addaa kan ta’an Lenderking, uummata Ymeniif aarga galfii namoomaa fiduuf akkasumas furmaata siyaasaa waariinsa qabu argamsiisuu fi deggersa sadarkaa addunyaa mirkaneessuuf adeemsa gam lamaan hirmaachisu irratti fuuleffachuuf waadaa seenaniiru.
Prezidaanii fi ministriin dhimma alaa rakkoo namoomaa hammaataa adeeme salphisuuf tattaaffii godhamu dursuu akkasumas gargaarsa namoomaa fi uummanni Yemen meeshaalee bu’uuraa akka argatan gochuuf cicha qabnu ifa taasisaniiru jedhan.
Jila addaa kan ta’an Lenderking, Yunaayitid Isteetis diplomaasummaaf dursa kenniti jedhan.
Nuti Yemen keessatti nagaa waarinsa qabu fiduu akkasumas uummata Yemeniif boqonnaa waarinsa qabu fiduuf malli tokkichi furmaata siyaasaa paartilee tokko gochuu danda’u ta’uu isaa mirkaneessuu feena. Tokkummaa mootummootaa fi michoota keenya galoo galaanaa waliin ta’uu dhaan tattaaffii diplomaasummaa sadarkaa addnyaa jajjabeessuf amma hojjetaa jirra. Wal waraansa Yemen keessaa dhaabsisuuf paartileen gara mariitti akka deebi’an dhiibbaa goona jedhan.
Dubbi himaan ministrii dhimma alaa Price, yeroon walitti bu’iinsa dhaaban amma. Waraanaan furmaati hin jiru jedhan jechuu dhaan gulaalaan har’aa yaada isaa xumura.